Wararka - 10 dariiqo oo lagu furo jiilaalka Nederland
10 siyaabood oo loo furo jiilaalka Nederlandka
1 Suuqa Kirismaska
Wadooyinka waaweyn ee ifaya iyo gawaarida uumiga ah ee iibka ah hortooda, waxaad arki doontaa sida Nederlandku u dabaaldegaan kirismaska ​​una soo dhoweeyaan xilliga qaboobaha. Magaalooyinka waaweyn iyo kuwa yaryarba waxay lahaan doonaan suuqyo Kirismas ah, iyadoo boqolaal xero ah lagu iibiyo cunnooyinka Kirismaska, hadiyadaha, nalalka , dhogorta, alwaaxda xardho, shumacyo iyo inbadan.Musik wanaagsan oo kirismas ah, waad cuni kartaa oo ciyaari kartaa adiga oo ku raaxeysanaya jidadka quruxda badan iyo bandhigyada yaryar.
2.Laydhku wuxuu iftiimiyaa habeenkii qabowga
Bandhigga Nalalka Nederlandka sidoo kale wuxuu bilaabmaa xilliga qaboobaha, isagoo u keenaya iftiin habeenka dheer Amsterdam, Eindhoven, xitaa magaalada farmaajo ee Gouda waxay leeyihiin xaflado fudud, waxaadna raaci kartaa doon yar oo ay la socdaan labo saaxiibbo ah si aad u aragto Holland habeenkii.
Amsterdam Light Festival waxaa la qabtaa Diseembar illaa Janaayo sanad walba (Bandhigga Iftiinka ee 2016 waxaa la qaban doonaa Diseembar 1 ilaa Janaayo 22). Farshaxanno fudud oo ka socda adduunka oo idil ayaa iman doona Amsterdam si ay u soo bandhigaan shaqadooda. Nalalka ayaa ka gudbi doona kanaalka iyo waddooyinka ku hareeraysan si ay u iftiimiyaan habeenkii qaboobaha kanaalka. Habka ugu wanaagsan ee lagu arko kanaalka waa doonta habeenkii, laakiin waxaad u baahan tahay inaad tikidhada horay u sii iibsato.
Bandhigga Eindhoven Glow waxaa la qabtaa sanad walba bisha Nofeembar, marka ay magaaladu yeelato muuqaal cusub. Kaniisadaha, dhismaha saqafyada iyo meelo kale oo badan ayaa lagu qurxiyay nalal si gaar ah ay u farsameeyeen farshaxanno si ay indhaha qof walba u qabtaan. Wadarta guud ee wadada waxay ku saabsan tahay 3 ~ 4 kiilomitir, waad ku raaxeysan kartaa muuqaalka habeenka ee Eindhoven inta aad socoto. Waxaa la qabtaa sanad walba bisha Diseembar. Habeenki marka ay tahay, magaaladu waxay damisaa dhamaan telefishannada iyo laydhadhka, iyada oo la shido kumanaan shumacyo ah oo loogu talagalay habeenka laambadda.
3. Ha ka dhuuman karin jiilaalka, sida mawjadaha dabaysha
Miyaad qiyaasi kartaa in maalinta ugu horeysa ee sanadka cusub, in 10,000 oo qof ay isu soo baxaan oo isku dhex galaan biyaha qabow isla waqtigaas? Haa, Holland, waa wax waalan. Cunitaanka carnival ee bilawga sanadka cusub, ayaa la qaban doonaa in ka badan 80 magaalo oo dalka ah Si kasta oo ay u qabowdo jiilaalka Nederlandka ah, xerada quusitaanka sanadlaha ah ayaa sii ballaarineysa.
Dhammaan noocyada kala duwan ee howlaha barafka xilliga jiilaalka
Dabcan, booqo bartamaha magaalada Zwolle ee dalka Nederland si aad u aragto farshaxanno baraf ah, halkaas oo farshaxanno ka kala yimid dalal kala duwan ay ku kulmaan. Fiiri sida ay ugu soo jeestaan ​​xumaanta xagga sixirka, farshaxanka barafka ee iftiinka iskaashiga, hufnaanta iyo quruxda badan. Iswidhan maahan oo keliya, laakiin sidoo kale Nederland, marka laga jaro 10 digrii, wax walba waa barafoobi doonaan, dabcan, waxaad xiran tahay dhar diirran oo gaar ah iyo galoofyo jirkaaga diiran, iyo kala badh saacad waad ku raaxeysaneysaa qabowga iyo cabitaanka khamriga labadaba.
Xilliga Jiilaalka ee Nederland, waa inaad sheegtaa waa barafka, ma jiro buur ku taal waddanka hoose oo aadan ka mari karin barafka, laakiin isboortiga ayaa ah ciyaar isboorti u ah dad badan. hoolalka iyo matxafyada, waxaadna arki doontaa dad badan oo qoob-ka-ciyaaraya oo baraf ka dul dhacaya barafka iskeetiketka, oo kula kululaanaya koob ka mid ah kookaha kulul. Jiilaalku wuxuu umuuqdaa mid xiiso badan u leh carruurta aan ka cabsan qabowga. Ku tag Efteling kaynta jiilaalka ee sheeko cirfiid ah; Safarro macno leh ku tag waddamada fog ee madxafyada tareenka, fiiri sida loo hindisay matoorada uumiga, isla markaana gacmahaaga ku ciyaar masawirro baraf ah. Carruurta, waa xusuus farxad leh.
Halkee ayaan ka heli karaa maraqa digirta ugu fiican Nederland Dusha gaariga Snerttram, dabcan! Nalalka diiran ee saaran gaariga fiilada leh, dhirta cagaaran iyo farshaxanleyda jimicsiga oo si nafsaani ah u ciyaaraya, tilmaamuhuna wuxuu ku siin doonaa xoogaa xan ah si uu niyadda u yareeyo. Inta lagu gudajiro, indhaha caanka ah ee quruxda badan ee Rotterdam ayaa la mari doonaa.Sidaa darteed taraamka safarka ayaa sidoo kale ah hab wanaagsan oo lagu booqdo Holland xilliga qaboobaha.
6.Cunnada ayaa jirka diirisa, qalbigana diirisa
Maaddaama Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub soo socdaan, cuntada sidoo kale waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan xilliga qaboobaha ee Holland. Jiilaalka Nederland ma soo gaabi karo maraqa digirta, waana inaad isweydiisaa, maraqan cagaaran ee cajiibka ah uma muuqdo mid aad u wanaagsan. casho jiilaal Dutch ah oo loogu jecel yahay, oo leh digir, baradhada, karootada, celery, oo ay weheliso hilibka doofaarka iyo hilibka doofaarka, maraqku waa mid aad u hodan ah, hadaad dhadhamiso, waxaa hubaal ah inaad heli doonto dhadhankeeda wanaagsan, jiilaalka xilliga qaboobaha, oo ay ka buuxdo tamar.
Stroopwafel, waa mid ka mid ah cunooyinka fudud ee ugu caansan. Iyadoo sharoobada caramel ee dhexda ku taal, banaanka waa mid camiran oo gudahana waa jilicsan yahay oo xanjo badan, runti macaan laakiin ma dufan. .Qaabka ugu saxsan ee loo cuno cookie-kan ayaa ah in ka badan koob qaxwaha qaxwaha ama shaaha oo lagu cuno kulul.
7.Waxa lagu socdaalaa xeebta
Jiilaalka wax waliba way engegeen, kumanaan mayl oo baraf ah, ku istaagida barafka iyo daawashada badda sidoo kale waa nooc qurux ah Nederland waxay leedahay 250 kilomitir oo xeeb ah, sidaa darteed waxaad ku kululeyn kartaa maqaaxi u dhow.
8. Shaqada dab damiska ee waddooyinka
Habeenki sanadka cusub ee bisha Diseembar 31, magaalo kasta waxay soo bandhigi doontaa rashka gaarka ah iyaga dhexdooda, buundada Erasmus ee ku taal Rotterdam waa tan ugu cajaa'ibka badan, dadka sidoo kale waxaa loo ogol yahay inay soo iibsadaan rashka yar yar si ay ugu raaxaystaan ​​maanta.
9.Xisbiyada qaaska ah waxay maraan jidadka waxayna la damaashaadaan qof walba.
Waxaa jiri doona xaflado badan oo mawduucyo kaladuwan ah oo lagu qaban doono jidadka iyo fagaarayaasha Tusaale ahaan, waxqabadyada Kirismaska ​​ee Sinterklaas, Deventer's Dickens Festival, ama xilliga iibka Kirismaska.
10. Dhageyso riwaayadda
Ku dhex lugee riwaayad qadiimi ah, ku dhex marto Madxafka Qaranka. Matxafyada iyo matxafyada ayaa sidoo kale martigaliya munaasabado ku saabsan mowduucyo kala duwan si loo hubiyo in xilliga qaboobahaaga ee Netherlands uusan cidlo noqon doonin.